काठमाडौं । एउटा आँपको मुल्य कतिसम्म पर्छ ? धेरै भए १०० देखि ५०० सम्म पर्छ होला ।
तर भारत मध्य प्रदेशको जबलपुर शहरबाट करीव ५० किलोमिटर टाढा चारगावान क्षेत्रमा रहेको आँप फार्म हाउसमा पाकेको आँप निकै चर्चामा आएको ।
फार्म हाउसका मालिक संकल्प परिहारका अनुसार प्रति किलोग्राम ४ लाख ३० हजारसम्म पर्न सक्छ । विशेष गरेर जापानमा पाइने यो महँगो प्रजातिको आँपलाई टाईयो नो तामागो भनेर चिनिन्छ ।
यो मूल रूपमा जापानमा मात्र पाइन्छ । उता, जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुरका बागवानी वैज्ञानिक प्रो. एसके पाण्डेले फार्ममा भएको आँपको मूल्य सम्बन्धिको दावीलाई खारेज गरेका छन् ।
आँप संरक्षण गर्ने प्रणाली नै अहिले चर्चाको विषयवस्तु बनेको हो । संकल्पले यस आँपको रूखहरूको रक्षा गर्न तीन गार्डहरू नियुक्त गरेका छन् । गार्डहरुसँग साथमा नौ कुकुरहरू पनि त्यस आँपको सुरक्षामा लागेका छन् ।
संकल्पले चेन्नईको एक नर्सरीबाट तीन बर्ष पहिले विभिन्न प्रजातिहरुका करिब १०० आँपका बिरुवा ल्याएका रहेछन् ।
कृषि मन्त्रालय, भारत सरकारका अतिरिक्त आयुक्त, बागवानी विभागका डा। नवीन पटेलले यदि बोटबिरुवा वा बागवानी सम्बन्धी सामग्रीहरू अन्य देशहरूबाट ल्याउनुपर्‍यो भने, त्यहाँ एक पूर्ण प्रक्रिया भएको कुरा जानकारी गराए । त्यहाँ एक परीक्षण समिति पनि रहेको छ ।
आवेदन पछि समितिले निर्णय गर्छ कि अर्को देशबाट भारत ल्याईरहेको बिरूवा भारतका लागि उपयुक्त छ वा छैन ।
संसारको सबैभन्दा महँगो आँप आफुसँग भएको दावा गर्ने संकल्पको कुरामा कृषि वैज्ञानिकहरूको फरक मत छ । प्रा. एसके पाण्डेले भारतमा १२०० किसिमका आँप पाउने उल्लेख गर्दै भने, ‘यो भन्न सकिदैन कि यो ताइयो तामागो प्रजाति हो, जबसम्म डीएनए मिल्दैन ।
खेतका मालिकलाई यसको विविधताका बारे थाहा छैन् । न त उनले आधिकारीक नर्सरीबाट बिरुवा लिएका छन् । चेन्नईमा धेरै नर्सरी सञ्चालकहरूले धेरै प्रजातिहरू मिलाएर नयाँ प्रजातिहरू तयार गर्दछन्, जुन मूल प्रजाति हो कि होईन भनेर पत्ता लगाउन सम्भव छैन ।’
एउटा आँप कम्तिमा ३५० ग्राम हुन्छ । यसमा चिनीको मात्रा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्दछ ।
यस आँपको लागि तापमान र सूर्यको प्रकाशको लागि विशेष प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ । ताइयो नो तामागोको अर्थ जापानमा ‘सूर्यको अण्डा’ भन्ने हुन्छ ।